E nwere ọtụtụ ihe mere nwere ike ị chọrọ mpikota onu gị ọdịyo faịlụ: na abịakọrọ ọdịyo faịlụ abịa na a nta size, nke nwere ike ịzọpụta ohere na kọmputa gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ngwaọrụ ị na-azọpụta ha ka ha. Ọ bụkwa zuru okè n'ihi na web ojiji dị ka ọ ga-adị mfe enuba faịlụ online. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị ezite ha ka ha na onye ọzọ, nke a nwere ike mfe mere site attaching ya na ihe e-mail.
Iji nyere gị aka mpikota onu ọdịyo faịlụ, i kwesịrị audio Compressor dị ka Wondershare Video Ntụgharị. Ọ bụghị naanị a video Ntụgharị, kamakwa ihe dị mfe na-eji audio Ntụgharị na Compressor. Soro zuru ezu nduzi n'okpuru ịmụta otú mpikota onu ọdịyo faịlụ na ya. Ị nwere ike ibudata ya mbụ:
1 Tinye ọdịyo faịlụ ka a audio Compressor
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Video, pịa Add Files button na isi interface mbubata ọdịyo faịlụ na ị chọrọ mpikota onu. I nwekwara ike ịdọrọ na dobe video faịlụ ozugbo na isi window.
2 Họrọ dị iche iche mkpakọ ụzọ
Here're tumadi abụọ ụzọ dị iche iche mpikota onu gị ọdịyo faịlụ:
Method 1: mpikota onu ha n'ime dị iche iche formats dabere na mmasị gị
MP3 bụ nhọrọ kasị mma dị ka nke a bụ ụkpụrụ audio format-akwado site na kasị media Player na ngwaọrụ. Ọzọ mkpakọ format na i nwere ike iji bụ WMA. Ọ nwere ala bitrates, nke dị mma maka online gụgharia. Wondershare Video Ntụgharị pụrụ inyere gị aka mfe tọghata gị audio faịlụ ka formats-amasị gị. Iji mee nke a, dị nnọọ pịa format foto n'akụkụ aka nri na mgbe ahụ gaa Format> Audio ịhọrọ mmepụta usoro.
Method 2: Vary audio ntọala
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-mbụ audio format, i nwere ike dị kpatụ audio ntọala dị ka bit ọnụego, ọwa na sample ọnụego. N'ozuzu, na ala ntọala, nta faịlụ size ga-adị. Lower audio ntọala, dị nnọọ pịa Ntọala akara ngosi (ọ bụ na ala n'aka nri nke isi window) na-aga Obere Size taabụ. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga na-akpaghị aka belata size gị audio faịlụ. Alternatively, ị nwere ike ịga nke ọzọ na taabụ iji aka ịgbanwe audio ntọala dị ka gị mkpa.
Mgbe agbanwe agbanwe na ntọala gị ọdịyo faịlụ, pịa OK na ị ga-alaghachi bụ isi window. Ebe i nwere ike pịa Play icon ka ịhụchalụ mmepụta N'ihi.
3 Malite mpikota onu gị ọdịyo faịlụ
Ikpeazụ bụ na pịa tọghata bọtịnụ iji malite compressing gị ọdịyo faịlụ. Ị ga-esi na abịakọrọ audio mgbe a mgbe.
Ebe a bụ mkpirikpi video nkuzi.
Olee otú mpikota onu Video maka Vimeo
FLV Compressor: Olee otú mpikota onu FLV Files Fast
Olee otú mpikota onu a Video na Wondershare Video Converter Ultimate
Best Music Downloader (Free na akwụ ụgwọ 2015) maka Devices
The TOP 5 Piano Sheet Sites
Top 10 Music Ghọta égwu Amata Music
> Resource> Music> Olee mpikota onu Audio Files